Bọchị: Machị 9, 2020
Studentsmụ akwụkwọ na-amụ akwụkwọ na Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARDEMİR), ndị na-amụ na mahadum na kọleji ndị chọrọ ịme ihe ọmụmụ, ga-ahazi akwụkwọ ndebanye aha ha n'oge ọkọchị na Eprel 17, [More ...]
Suzọ Nkwadebe Karasu Maka Ahụ
Ihe oru ngo nke Karasu na-akwado ugbu a ịmalite mgbe ọ kwụsịrị ugboro abụọ na 2012 na 2017. Companylọ ọrụ ahụ, nke malitere na 2018 site na iji merie nchigharị nke oru a, nke malitere na 2019, malitere ọrụ ọhụrụ Infrastructure Investments. [More ...]
Ihe oru ngo nke Kanal Istanbul bu Nkwado N’oge na adighi anya
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan, n'okwu ya n'okwu mmeghe nke ememme Kınalı-Odayeri (N'agbata Kınalı-Çatalca Junction) n'okporo ụzọ awara awara nke Marmara; N'ịkọwapụta na a ga-ewepụta Kanal Istanbul Project n'isi oge, "Anyị ekpebisiri ike iweta Kanal Istanbul na obodo anyị." [More ...]
Onye isi ala Erdoğan gara ememme mmeghe nke Northern Marmara Motorway Kınalı-Odayeri Nkebi
Emegheri okporo ụzọ North Marmara iji rụọ ọrụ na Sọnde, Machị 29,4, ya na Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan, na ngalaba Kınalı-Odayeri, n'etiti Kınalı na Çatalca Intersections. Ememe Onye isi oche Erdogan na office office [More ...]
Emepe North Marmara Kınalı-Çatalca Junction emepere
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa nke Republic of Turkey kwuru, “Taa, anyị na-emeghe ọrụ dị n'etiti Junction Kınalı na Çatalca Junction. Site na ọrụ a na-abịa, site na ógbè ndị agbata obi n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, site n'ọnụ ụzọ ámá [More ...]
Ngwaọrụ nwere ọghọm dị na ọdụ ụgbọ mmiri Metrobus mebiri
Ekpebisiri ike na ụfọdụ ngwaọrụ ọgwụ ndị Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) debere na nbata nke nkwụsị obodo n'etiti oke oria ọrịa na coronavirus mụbara na oge oyi. IMM, udiri oria obula nke Corona [More ...]
TÜRASAŞ ga-enweta ndị ọrụ na Threelọ Ọrụ atọ Ejikọtara ọnụ?
Kọmịọna Mịnịstrị na-ahụ maka njem na njem bụ Cihad Koray kwuru na enwere ajụjụ ndị dị mkpa ịza banyere ụlọ ọrụ atọ ahụ gbakọtara n'okpuru otu ụlọ na mkpebi nke Onye isi ala. N'izu gara aga, Onye isi ahụ bịanyere aka na TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ na TÜVASAŞ [More ...]
N'okpuru ngwa "Ime Nleba Anya Ntughari Ime Ime Niile" nke Ankara Metropolitan, a na-eme ka mmebi iwu na ngabiga. Ekele usoro igwefoto etinyere na ntuzi aka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavas 7/24 [More ...]
Resource achọtara T2 Tram Project na-amalite ebe ọ kwụsịrị
T2 Tram Line… eriri 10 km nwere ọdụ 8. Onu ogugu bu ego ruru nde 133. Ntọala atọrọ na Nọvemba afọ 2015 mana ụlọ ọrụ nkwekọrịta ahụ enweghị ike ịrụcha ụlọ ọrụ ahụ n'ihi mmụba ọnụego mgbanwe ego. Odi ihe di ka pacenti iri asaa na asaa n’ime oru a. [More ...]
A malitere iji AS-TA-MA mee ihe n'okporo ụzọ
Ngalaba Ngalaba Obodo Ankara Na - ahụ Maka Science Science malitere iji igwe nrụpụta Asphalt, nke bụ onwe ya ma aha ya bụ AS-TA-MA, n'okporo ụzọ nke isi obodo ahụ. Gburugburu ebe obibi na akụ na ụba, ọ na-abanye ebe nnukwu igwe anaghị abanye. [More ...]
Akwa ntaramahụhụ maka ụgbọ mmiri na-egbochi Ọwara Izmit!
Marmara Municipality Union na Kocaeli Obodo Ndị Isi Obodo Mayor Assoc. [More ...]
Marmaray enweghi ike iweghachite ndị njem achọrọ
Dịka ị pụrụ ịhụ site na webụsaịtị Marmaray, ka a na-eme atụmatụ itinye ego Marmaray, a na-eme atụmatụ iburu ndị njem 75.000 kwa elekere (ndị njem 1.200.000 kwa ụbọchị, ngụkọta nke ndị njem 2.400.000 kwa awa). Njikọ ntanetị dị na Marmaray ịntanetị [More ...]
Derbent abụghị naanị ọdụ ụgbọ ala Adapazarı na-akwụsịghị
Amachibidoro ụgbọ njem nke ndị Kocaeli site na imechi ọdụ ụgbọ okporo Adapazarı. Otu n'ime ọdụ ụgbọ oloko emechiri emechi ugbu a bụ ọdụ ụgbọ oloko Köseköy. E tinyere ya n’ọrụ n’ime obere oge. Ọbụna nke a bụ nwa oge [More ...]
Ọ bụrụ na Ọpụpụ Train Station Trabent, ị ga-akwụ ọnụahịa ahụ
E mechiri okporo ụzọ ụgbọ oloko a na-eme akụkọ ihe mere eme nke Haydarpaşa-Bağdat, nke nọ na-arụ ọrụ kemgbe afọ 150, emechiri ọnwa ole na ole gara aga n'ihi ọrụ akara ahụ. TCDD kpọgidere ọkọlọtọ n'afọ gara aga na ọdụ ahụ ga-emeghe na Mee 2, ma ọdụ ahụ ka dị [More ...]
Taa na History: 9 March 1911 Chester Project
Oru ngo nke Chester Project, March 9, 1911, na History Taa, ka e nyefere Mgbakọ ndị Mebusan, mana ejidere ya ogologo oge ma ọ gafere.
Razọ ụgbọ elu ga-emeri ihe mgbochi corona na ahia ofesi
A na-ekpochapụ Transportgbọ njem Ọhaneze na Konya
Ndi Nnobi Ndi Agwo ahia Konya ..!